ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न कसले गर्यो दुस्प्रयास ? | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न कसले गर्यो दुस्प्रयास ?
ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न कसले गर्यो दुस्प्रयास ?
SAHARA TIMES Friday, August 3, 20180No comments
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारलाई अहिले चारैतिरबाट हमला भइरहेको छ । डाक्टर गोविन्द केसीको विषयलाई लिएर नेपाली काँग्रेस, विवेकशिल पार्टी , नयाँ शक्ति पार्टी लगायतले विभिन्न समाजिक संघ संस्था तथा संगठनहरुले घेरा हालेर अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्माले नै राजिनामा दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । सरकारको नेतृत्व लिनुभएको नेकपामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चारैतिरबाट असफल देखाएर राजिनामा दिन लगाउनेसम्मको अवस्था सृजना भएको छ ।
यसैबेला नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मौन बस्नु भएको छ । उहाँ मौन बसेका कारण ओली झन अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ । अर्कोतिर सरकारमा हालै सहभागी हुनुभएको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि मौन बस्नुभएको छ ।
सरकारमा रहेको कारणले त्यसको बचाउमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बेला मौन बसि दिएर अ‍ोलील एक्लै निकै अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ । उपेन्द्र यादव र प्रचण्डको मौनको कारण धेरैले खोज्न थालेका छन् । थाइल्याण्डबाट फर्केपछि प्रचण्ड मौन हुनु र सरकारका हिस्सेदार भएर पनि उपेन्द्र यादव मौन बस्नुले पनि ओलीलाई सरकारबाट हटाउने हो कि भन्ने पनि विभिन्न आशंकाहरु भइरहेका छन् ।
यसैबेला राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरि कदम चालेको छ । नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई विश्वासको मत समेत दिएको राजपा नेपालल्े सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको अवस्थामा पुगेको छ । र, त्यसको तयारीमा नेताहरु जुट्नु भएको छ ।
सरकारबाट समर्थन फिर्ता मात्र होइन, सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन पनि गर्ने तयारीमा राजपा नेपाल जुटेको छ । राजपा नेपालले नेकपासँग तीन बुँदे सम्झौता गरि विश्वासको मत दिएको थियो । तर, सरकारले हालसम्म त्यसमध्ये कुनै सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । त्यसका लागि क्रुद्ध बनिरहेको राजपा नेपाल अहिले प्रध्यापक डा.गोविन्द केसीको विषयलाई पनि आफ्नो एजेण्डा बनाएको छ ।
साउन ३ गते राजपा नेपालले सविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाय लगायतका माग राख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
तर, सविधान संशोधन र रेशम चौधरीको रिहायप्रति प्रधानमन्त्री ओली सकरात्मक नदेखिएपछि राजपा नेपाल सरकारप्रति कठोर हुन थालेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सविधान संशोधन र रेशम चौधरीको रिहायको विषय गौण विषय हो अब विकास र समृद्धिको कुरा गरौं त्यसमा सबै मिलेर कार्य गरौं भनेपछि राजपा नेपालका नेताहरु संशकिंत बन्नुभएको हो । ज्ञापनपत्र दिएपछि राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलको बैठक बसेको थियो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि निरन्तता दिने विषयमा छलफल भएको थियो ।
तर छजना सदस्य रहेको सो अध्यक्षमण्डलमा सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने कि नलिने विषयमा मत बाँझिएको छ ।
राजेन्द्र महतो निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने अनिल कुमार झा र राजकिशोर यादवलगायतले विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । राजेन्द्र महतो र शरतसिंह भण्डारी तथा राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले विश्वासको मत फिर्ता लिने विषयमा हातार गर्न नहुने सुझाव दिएको छ ।
एकपक्षले तत्कालै समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा रहेको छ भने अर्को पक्षले परस्थिति हेरेर निर्णय लिनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले भन्नुभयो, सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने अवस्था सृजना भइसकेको छ, तर त्यसअघि हामीले माहौल बनाउन चाहेका छौं ।’
सरकारको काम कार्यवाही र उसले लिने निर्णय र गतिविधिलाई नजिकबाट नियालि रहेको भन्दै अध्यक्षमण्डलका सदस्य यादवले समर्थन फिर्ताको विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
राजपा नेपालले तीनवटा मुद्दा जनस्तरबाट उठाएर जनतामा माहोल बनाउने तयारी गरिरहेको छ । रेशम चौधरीको रिहायलाई राजपा नेपालले मुख्य मुद्दा बनाएको छ । कैलालीबाट प्रतिनिधिसभा चुनाव जित्नु भएका रेशम चौधरी टिकापुर घटनाको आरोपमा अहिले थुनामा हुनुहुन्छ ।
त्यसको रिहायका लागि सरकारले पटक पटक प्रतिवद्धता जनाएपनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । रेशम चौधरी रिहाय नभएको कारण राजपा नेपाल सरकार भन्दा बाहिर रहेको छ । त्यस्तै, सविधान संशोधनको मुद्दालाई पनि राजपा नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ । विगत चार वर्षदेखि सविधान संशोधनको विषय उठाइरहेका राजपा नेपालले हालसम्म त्यसमा सफलता हात पारेको छैन ।
सविधान संशोधनको माग गर्दै राजपा नेपालले लामो समय आन्दोलन गरेको थियो । तर, सविधान संशोधन नहुँदै आनदोलन सेलायो । तर, राजपा नेपालले त्यसलाई मागको रुपमा कायम राखेकै छ । आन्दोलनको क्रममा विभिन्न नेता तथा कार्यकर्तामाथि मुद्दा लागेको थियो । सोही मुद्दाका कारण कतिपय फरार रहेका छन् भने कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता थुनामा छन् ।
आन्दोलनका क्रममा लागेका सबै मुद्दाहरु फिर्ता हुनुपर्ने राजपा नेपालको माग रहेको छ ।
यी तीनवटा मुद्दा लिएर राजपा नेपाल जनतामा जाने तयारी गरिरहेको छ । लामो समयसम्म चुप लागेर बसेपनि सरकारले कुनै पनि सुनुवाई नगरेको भन्दै अब के गर्ने भनि राय लिनका लागि जनताको माझमा जान लागेको हो ।
जनस्तरबाट पनि सरकारलाई दवाव दिनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउनुको साथै विभिन्न खालका आनदोलनका कार्यक्रम गरिने राजपा नेपालका नेताहरु बताउँछन् ।
यस्ता गतिविधिहरुबाट जनताबाट आउने राय सुझावको आधारमा आन्दोलनको घोषणा गर्नुको साथै समर्थन फिर्ता लिने तयारी राजपा नेपालको रहेको छ ।
आन्दोलन गरेर सरकारलाई गलाई सकेको काँग्रेससँग राजपा नेपाल नजिक हुँदै गइरहेको छ । विगतमा पनि काँग्रेससँग सहकार्य गरिसकेका राजपा नेपाल पुनः सहकार्य गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनत्र बुझाएपछि राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्नुभएको छ ।
काँग्रेससँग छलफल गरेर राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुर भारत पुग्नुभएको छ । काँग्रेसकै सल्लाह अनुसार महन्थ ठाकुरले भारतको मनोभाव बुझ्नका लागि यतिखेर दिल्लीमा हुनुहुन्छ । त्यहाँका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहदेखि लिएर करण सिंह, राम माधवलगायतका नेताहरुलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । विश्वासको मत फिर्ता लिएर काँग्रेससँग सहकार्य गरेर आगाडी बढ्ने विषयमा पनि छलफल हुनसक्ने राजपा नेपालका नेताहरुले बताउनुहुन्छ ।
राजाप नेपाल र काँग्रेसबीच भएको छलफलमा एक अर्काको मुद्दालाई समर्थन गर्ने सहमति बनेपनि सझा मुद्दा बनाउन सकेको छैन । राजपा नेपालले उठाएको मुद्दालाई काँग्रेसले आफ्नो एजेण्डा बनाउनु पर्ने र काँग्रेसले उठाएको मुद्दालाई राजपा नेपालले आफ्नो एजेण्डा बनाउनु पर्ने विषयमा सहमति बन्न नसकेका राजपा नेपाल पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु बताउनुहुन्छ ।
राजपा नेपालले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपनि संसदमा विपक्षी बेन्चमा बसिरहेको छ । राजपा नेपालका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल भन्नहुन्छ, हामी सरकारको विपक्षमा नै छौं । दुई तिहाई बहुमतका लागि मात्र हामीले समर्थन गरेका हौं । सरकारलाई सविधान संशोधन गर्नमा सजिलो होस् भनेर मात्र हामीले समर्थन गरेका हौं ।’
राजपा नेपालले आफ्नो मुद्दालाई संसदमा जोडतोडले उठाउने भएको छ । राजपा नेपालले सविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहायलगायतका विषयलाई संसदमा सशक्त रुपमा उठाउने भएको छ ।
आवश्यक परे संसद अवरोध गर्नुको साथै त्यसलाई घेराउ गर्नेसम्मका कार्य राजपा नेपालले गर्ने अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले सहारा टाइम्सलाई बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो, यतिका दिन राजपा नेपालले सरकारको भूमिकालाई हेरेर बसेको थियो, सरकारले गरेका प्रतिवद्धताहरु कसरी पूरा गर्छन्, राजपा नेपालले उठाएको माग पूरा गर्नमा चिन्तित वा प्रतिवद्ध छन् कि छैनन् त्यो हेरेर राजपा नेपाल बसेको थियो ।
सरकार मधेशको मुद्दाप्रति गम्भीर नदेखिएकाले सरकारमाथि दवाव बढाउन सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ ।’